Izinto ze-5 ezibalulekileyo malunga ne-Inspired 2012 - Geofumadas
I-5 Izinto ezibalulekileyo malunga ne-Inspired 2012
Ngoobani abalandela iakhawunti kwi-Twitter @geofumadas Uya kuba uqaphele iintsuku ezimbini ngokugcwele ezinikezelwe kwi-hashtag #BeIn2012. Ukuhlaziya ngaphezulu komxholo ohlanganisiweyo kwiintsuku ezintathu, nantsi isishwankathelo sezinto ze-5 ezibalaseleyo kwi-Inspired:
1 Eyona projekthi inomdla kakhulu
Ukusuka kwi57 iiprojekthi zokugqibela, Inkqubo eyenziwe ngabafana baseAzerbaijani ekufuneka ndiyivume yandimangaza kakhulu, ndothuka. Baphuhlise ngeVBA kwiPowerDraft (uqoqosho lweMicrostation), beyiphumeza endala ngeXFM (eyandulelayo imodeli ye-I), ukukhupha iimpawu kwizinto ezenziwe kwi-DGN, ukuzilawula kwiPostGIS, njengoku:
Iimpawu zesithuba zibanjisiwe kwiimpukane
Iimpawu ze Tabular zifakiwe
Yonke into iwela kwiDatha yePosiGreSQL
Ukulawulwa kwento ngePosiGIS ngaphandle koxinzeleloUmlawuli weGeospatial
Ipapashwe kuphuhliso olucacileyo kwi-MapGuide OpenSource
Ngelixa singazi ukuba bazakuphumelela, siyazi ukuba baya kuluxhaphaza olu phuhliso kuba ukuza kuthi ga ngoku abasebenzisi abaninzi bayathandabuza ukusebenzisa uMshicileli we-GeoWeb ngelixa ifomathi ye-idpr yinguqulo yotshintshiselwano ngewebhu kwaye iSeva yeGeospatial igcinwa ngamaxabiso ngaphandle kwengqondo. I-GIS iyonke ye-900 yindibaniselwano yabasebenzisi beGeoengineering hayi umgca othe nkqo.
2 Imodeli ye-I, imifuziselo yeBIS
I-3 inyanzelisa ukwandiswa kwayo kwifomathi yokutshaya, enokubonakala kwizicelo eziqhelekileyo ezifana neOfisi, abafundi bePDF, i-iPad, Revit kunye ne-CivilXNUMXD. Ngelixa inguqulelo nje «icocekile»Ye-XML engene kwiimephu, iya kuthi iphela ibe ngumgangatho oya kugxila kulawulo lwedatha kwaye iyakwenza iDGN iswekile isoftware enokhuphiswano kunye nabasebenzisi abangaqhelekanga.
Uninzi lokuthenga lwamva nje oluye lwenziwa ngu-Bentley emva kweV8i ayijoliswanga ekuthengeni itekhnoloji entsha kodwa abathengi abanokubakho abasebenzisa uphuhliso olunokuphucula imodeli ye-I. Kwaye kulungile ngoku ukubona imizekelo yokwenyani yokuhamba komsebenzi usuka kwimbali, uyilo, ulwakhiwo, ubume bendawo, ubume bendawo kunye noyilo lolwakhiwo apho ukulandelela kudityaniswa khona kwizinto zokwenyani.
Kwingcaciso engaphezulu kwesinye benze umbulelo ongazenzisiyo kwifomathi ye-dwg ethi kulo nyaka ongeze ifomathi entsha. Kwaye, ngohlobo lwe7 oluqhubayo ngelixa i-16 bits, i-900 idale i-DGN V8 kuphela ngokutsiba kwi-32 bits kwaye iyishiya ilungile ukuze i-64 bits ihlengahlengiswe kwiimpawu nge-I-modeli. Isigqibo esikhulu esingabinangxaki yokuguqulelwa, umbandela ngokuqinisekileyo oya kuphuma ngakumbi ngaphambi kokhuphiswano.
3 Qhagamshela, i-900 Dropbox
I-Bentley ilungiselela inqanaba elitsha kwinto eyayibizwa ngokuba yi-Bentley Remix, ekhutshwe kwi-1994. Ngoku iba yindawo yokugcina kunye nokudibanisa isitayile indawo yeDropbox, yandisa imixholo esefini, usetyenziso lweselfowni kunye nee-Intranets.
4 Iselula njengemxholo ophakathi
Akumangalisi ukuba semthethweni kwayo, kodwa simangalisiwe yinto ephambili esiyinikiweyo ngalo mcimbi. Ke sibona iProjekthiWise kunye neAssetWise idityaniswa zicelo zeselfowuni. Kunyaka ophelileyo basibonise malunga ne-iPad, ngoku malunga ne-Windows kunye neWindows yeWindows kwisitayela seTiles UI.
I-SDK ethembisayo, ukuzibophelela kumaqonga amathathu aphambili, umanyano ibalekwe ngeTrump, ukuxhotyiswa kwe Ukwahlukana kunye no-Itara / Pointools kunye nemiboniso ephilayo iqinisekisa ukuba imele ntoni isiganeko: unxibelelwano lweSelfown.
5 UMyili weZinto zokuSebenza zeWindows, usetyenziswe kwi-network
Olu luhlobo lwePowerDraft / PowerCivil-luhlobo olujolise kwiinkqubo zonxibelelwano ezinxibelelana nezinto ezinokusetyenziswa kwiiprojekthi zamanzi amdaka, iinkqubo zothutho kunye neMephu yemephu enokunyanzelisa ukubulawa kwezicelo kunye nokubekwa kwindawo ebalaseleyo ye-I .
Ukuqukumbela, kukhuthazwe ukuba kuthiwe okwesihlandlo sesithathu kubanjelwe e-Amsterdam, iphantse yangqinelana I-SPAR Yurophu kwi-Hague. Ngeli xesha kwihotele ejikeleze izithili ezilingayo zabakhenkethi. Ngokukhuthaza okufanayo kwi-Cannabis ukusuka kubantu base-Bentley, ukubona oko kuya kwenzeka kwiminyaka ye-5, kulungiselelwe abasebenzisi beshishini bexesha elide.
Post edlulileyo«Edlulileyo Land Lines ikulungele in October
Post Next Ubusuku kwiiMali eziPhefumulelweOkulandelayo "